Soo dejisan Hotspot Shield 7.3 – Android – Vessoft
AndroidShabakadVPN iyo WakiilHotspot Shield
Shatiga: Adware, maxkamad
Bogga rasmiga ah: Hotspot Shield
Kulkulul Shield – software ah si ay u siiyaan arimaha gaarka ah oo ah in ay internet iyo ilaalinta xiriir Wi-Fi. Software wuxuu ku dhuuntaa ku-IP address of user iyada oo la abuuro VPN u dhexeeya qalabka iyo adeegyada Internet. Kulkulul Shield wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan ay ku goobood oo ay content jogoraafi ahaan. Software ayaa si toos ah u go’aamineysa ilaalinta network aan fiicnayn, taas oo ku xidhan ay heerka ammaanka. Kulkulul Shield u saamaxaaya in ay si fudud u kala bedesho ee server heli of USA, Japan, Great Britain iyo wadamada kale.
Sir gaadiidka socda iyo xilka
Qarsoon ee ku-IP address
Helitaanka goobta la content jogoraafi
Faallo ku saabsan Hotspot Shield
Hotspot Shield Xirfadaha la xiriira